Umphathi we-Kage Bunshin | Izincwadi Zamanje
Inkosi ye-Kage Bunshin
Kungabi ngaphezulu noma ngaphansi UNaruto uzumakiUma i-Dragon Ball ibanga ukuzwa futhi bekuyi-manga eyireferensi eminyakeni engamashumi ayisishiyagalolunye, ngokungangabazeki uNaruto nguyena obeke ibha ephezulu kakhulu eminyakeni eyishumi yokuqala yekhulu lama-XNUMX.
Naruto Kuyinto a manga kudalwe ngu Masashi Kishimoto, yaqala ukunyatheliswa eJapane ngo-November 1999, kuze kube manje yeqa omagazini abangu-350. ESpain singakuthola ezitolo zethu ezikhethekile zezincwadi ngesandla somshicileli IGlenat.
UNaruto Uzumaki uyi-ninja encane, i-joker, i-clumsy futhi hhayi kahle kakhulu ekilasini lakhe noma onekhono kakhulu. Empeleni uNaruto uyiJinchurikki, okungukuthi, oshiye uphawu emzimbeni wakhe lapho I-Kyubi (Impungushe enemisila eyisishiyagalolunye namandla amakhulu abhubhise idolobhana laseKonoha ebulala amakhulu abantu bakhona). AbakwaKyubi bamiswa futhi bavalelwa ngaphakathi eNaruto ngowesine I-Hokage (umholi wendawo) enikela ngempilo yakhe emzameni.
Naruto Akanawo umndeni, futhi ukhula ahlukane nezinye izakhamuzi zomuzi, ngoba ngaphakathi uphethe leso silo esingumbulali. Kepha okufunwa kakhulu uNaruto ukuthi ngelinye ilanga abe yiHokage akhombise wonke umuntu ukuthi uyakwazi yini nokuthi akasona isilo.
Ama-ninja kulolu chungechunge angabavikeli bezigodi zawo, futhi aqashelwe ukwenza imisebenzi yokushintshanisa imali esebenza njengomthombo wemali ezweni, le mishini isukela kokulula njengokuthola ikati lomuntu elahlekile ukutakula umholi wakomunye umuzi othunjiwe.
Phakathi nochungechunge uNaruto uzolwela ukufunda amasu amasha futhi alawule wonke amandla anawo ngaphakathi. Ekuqaleni kochungechunge uNaruto ungomunye wabafundi ababi kakhulu, kepha ngokuhamba kwesikhathi futhi ngenxa yokuphikisana / nobungane bakhe nomfundi ongcono kunabo bonke wesikole se-ninja (Sasuke Uchiha) uzohlala ethuthuka futhi ezedlula yena. UNaruto useqenjini le-ninja No. 7, ngaphansi komyalo kaKakashi Hatake, kanye noSasuke noSakura (abathandana naye, kepha lokho akubuyiswanga, ngoba uSakura uthandana noSasuke, obalahla bobabili kubo, benonxantathu wothando ohlala enikeza ukudlala okuningi).
Ngemuva kwemishini ethile neqembu lakhe, uthatha olunye lwezivivinyo ezimbili zaminyaka yonke ukuze afinyelele ezingeni le-chunin. Iqembu likaNaruto nabanye abavela eKonoha, kanye namanye ama-ninja avela kwamanye amadolobhana abamba iqhaza kulo mncintiswano. Kodwa-ke, lokhu kuphazanyiswa ukuhlaselwa okumangazayo u-Orochimaru (i-ninja ehlubukile evela eKonoha), ngokubambisana ne-Hidden Village of the Sand (ekhohliswe ngu-Orochimaru).
Engxenyeni elandelayo yendaba, kuvela ukuthi uSasuke ungowokugcina emndenini wakwa-Uchiha, ngoba umfowabo omdala u-Itachi wababulala bonke, wabaleka kulo muzi. Isisusa esikhulu sikaSasuke ukuthi kube nguyena ohamba phambili ukuze abulale umfowabo ngelinye ilanga, enze umndeni wakhe uvuke kabusha. Ukuvela kwalaba bokugcina abafuna ukuthatha iNaruto ngenhlangano engaqondakali ye-Akatsuki (okuyi-Itachi Uchiha) kuyasheshisa indaba, u-Akatsuki ufuna uNaruto ukukhipha amandla eKyubi bese eyisebenzisela izinhloso zakhe. Ngakolunye uhlangothi, u-Orochimaru, ngokulangazelela kwakhe amandla, ulungisa uSasuke, amqinisekisa ukuthi azomjoyina ukuze anikeze amandla okubulala umfowabo (ngenhloso enkulu ka-Orochimaru yokwaba umzimba kaSasuke, okuthi Njalo eminyakeni emithathu, njengezinyoka, u-Orochimaru kuhlala emzimbeni womunye umuntu ngaleyo ndlela yelula impilo yakhe). Ngakho-ke kuphetha lokho obekuzoba yingxenye yokuqala yendaba.
Indaba iyaqhubeka eminyakeni emibili nengxenye kamuva, lapho sibona khona ukuthi uNaruto ubuya kanjani ekuqeqesheni kwakhe okukhethekile noJiraya njengensizwa evuthiwe futhi enamandla ngokwengeziwe, ezimisele ukubhekana nenhlangano ye-Akatsuki futhi ekugcineni ithole uSasuke no-Orochimaru.
Njengakwi-Dragon Ball, okunye kokuhehayo okukhulu kochungechunge ezinye izinhlamvu ezisekelayo (hhayi ezesibili) uNaruto anazo ngakuye, yize indaba esemqoka izungeza iNaruto, inani elikhulu labalingiswa abanobuntu obunjalo obuchaziwe yenza lolu chungechunge lungakhathali ukuba yindaba yomlingiswa oyedwa nokuthi kukhona nabalingiswa abantshontsha ukugqama. Lolu chungechunge lunezilinganiso ezinkulu zamahlaya nezenzo ezigcwele, lwabelana neDrako Ball isimanga nemilingo (njengoba uSathane omkhulu angasho) amasu wokulwa (ukuthi uma, amasu okuqala, akuwona amakhophi eDrako Ball). Uma uGokuh wayeneKamehameha, iNaruto ine-Kage Bunshin (inqubo yokwenza izinto) kanye neRasengan.
Njengoba ungacabanga, izinombolo ezingaphezu kwezingu-350 (nalabo abalahlekile) zihamba ibanga elide, kepha uma ungathi lolu chungechunge olunconyelwayo ngisho nakwalabo abangawathandi kakhulu amahlaya aseJapan ngokujwayelekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » eziningana » Inkosi ye-Kage Bunshin
U-Ivan wangempela, izinsalela ezilungisiwe, kwakuyi-dyslexia yengqondo yengxenye yami ukuxuba amagama amabili abafowethu baka-Uchiha. Siyabonga ngenothi